Xaalada Abaareed Ee DDS |
Xaalada Abaareed Ee DDS
Intabadan degmooyinka iyo gobolada dawlada deegaanka soomaalida waxaa lagasoo sheegayaa xaalad jiilaal oo aad uadag.
Inta badan DDS waxaa kajira 4 wakhti oo kala ah Gu,u iyo Xagaa Dayr iyo Jiilaa kuwaas oo isku lamaan saamayn balaadhana kuleh nolosha bulshada reer guuraaga ah ee DDS iyo guudahaaba soomaalida.
Hadaba waxaa intabadan deegaanka laga dareemayaa kulaylka jiilaalka oo loo sababaynayo inayna deegaanka roobabkii dayrtu siwaagsan uga di,in walow uu gugii kahoreeyay ahaa mid barwaaqo ah.
Waxaa intabadan deegaanka kabilowday biyo dhaamis waxaana gabaabsiyay amaba gudhay baliyadii iyo Baraagihii biyaha taasoo muujinaysa in hadii uunan ilaahay roobka guga inoosoo dadajin ay xaaladu sii adkaankarto.
Waxaa muhiima inaan dhamaanteen ku baraarug sanaano xaalada nololeed ee bulshada oo aan ilaahay ubarino inuu raxmaadkiisa usoo dadajiyo islamarkaana udiyaar garawno sidii aan bulshada tabaalaysan ugarab istaagi lahayn.
Xukuumada DDS,haayadaha maxakiga ah iyo NGO yada intaba waxaan ugu baaqaynaa in lasameeyo diyaar garaw balaadhan silooga tabtaysto hadii xaaladu siixumaato raxmaadka eebana uu raago ,,ilaahay naguma raajiyee.